Tani waa sida ay isugu dayeen inay afduubtaan koontada WhatsApp ee Albert Rivera | Laga soo bilaabo Linux
Isaac | | Noticias, Shabakado / Adeeg
El hogaamiyaha xisbi siyaasadeedka Ciudadanos, Albert Rivera, ayaa waxaa soo gaadhay weerar taleefankiisa gacanta fariin dabin ah. Tani waxay dhacday bartamihii ololaha siyaasadeed kahor doorashooyinka cusub ee Spain. Doorashooyinkii afraad ee qaran afar sano gudahood, laba ka mid ah toddobadii bilood ee la soo dhaafay. Waxaas oo dhami waxay abuurayaan dhibaato weyn maadaama wax walba laga xannibo dalka gudahiisa iyo sababta oo ah in mid kasta oo ka mid ah doorashooyinkaasi ay ku kacdo ku dhowaad boqol iyo badh milyan oo Yuuro ... taas oo si fiican loogu maalgelin karo hawlo kale oo aad muhiim ugu ah sida waxbarashada iyo caafimaadka.
Weerarka lagu qaaday mobilka gacanta ee Albert Rivera ayaa ahaa loogu talagalay afduubka akoonkaaga WhatsApp inaad awood ugu yeelato inaad isaga dhigto barnaamijkan fariimaha deg dega ah iyo inaad ogaato waxa dhici kara hadii uusan ogaanin oo uusan soo sheegin. Laakiin Albert wuu gartay oo wuxuu ku wargaliyay ilaalada madaniga ah. Cabashadu waxay dhacday jimcihii la soo dhaafay ka hor maamulka, haatana Qaybta Dambiyada Telematic ee UCO ayaa baaraya kiiska.
Macluumaad badan lama bixin, laakiin hadda waxay awoodeen inay helaan qaar uun macluumaadka shakhsi ahaaneed ee siyaasiga Isbaanishka, laakiin kuwan dambiilayaasha ah ee internetka lagu eedeeyay ayaa iska dhigi karay waxayna fariimo u direen siyaasiyiinta kale ee Rivera uu ku dhex lahaa xiriiriyayaashiisa. Laakiin halkii aan ka fikiri lahaa wixii dhici kara ama dhici karay, oo aan adiga kuu daayo, waxaan arki doonnaa macluumaadka aan ka hayno kiiska ...
1 Aynu u dayno koodhadhka!
2 Sidee ugu guuleysteen inay afduubtaan WhatsApp
Aynu u dayno koodhadhka!
Tani ma aha fal haakariskuAynu u dayno kharbudayaasha. Hackers-ku ma ahan dambiile danbiyeed oo u heellan waxyaalahan. Hackers waa kuwa aqoon durugsan u leh qaar ka mid ah cilmiga, gaar ahaan barnaamijyada iyo amniga, iyo kuwa kale. In kasta oo ay run tahay in khubarada ku xeel dheer amniga internetka ay afduubeen ereyga 'hacker' oo ay keligood gacanta ku hayaan, ogow inay jiraan haakarisyo ka baxsan amniga.
uu malaha jabsadeyaal badan oo shaqeeya maalin kasta si aysan waxaas oo kale u dhicin, si loo damaanad qaado nidaamyada telematic ee doorashooyinka, ama looga hortago weerarada internetka ee shirkadaha iyo ururada. Hackers-ku waxay mas'uul ka yihiin abuurista nidaamyo kombuyuutar oo wanaagsan kana dhigaan kuwo amnigooda ka fiican. In kasta oo ay taasi jirto, warbaahinta, warshadaha filimada ee Hollywood hogaamiso, iyo suugaanta ayaa ka dhigaya dambiile iyaga oo isticmaalaya ereyga hacker si aan habooneyn.
Nasiib darro warbaahintani waa mid aad u awood badan oo ay ka dhigteen ereyga mid la mid ah Hackers ama danbi-jare. Inta badan dadka wax dila, khayaaruhu waa dembiile ka hawl gala shabakadda ama nidaamyada kombuyuutarka ... Xitaa RAE-da ayaa ku siisay inay ansax tahay, in kasta oo dhawaanahan ay ku dareen macno labaad oo ka fog tan, laakiin iyagu waxay sii hayaan kan ugu horreeya oo weli lama siinin dhammaan macnaha dhabta ah.
Taasi waxay tidhi, waxay ila tahay cadaalad, hadda waxaan u aadnay inaan kiiska eegno maxaa dhacay iyo sidii aan isku difaaci lahayn ...
Sidee ugu guuleysteen inay afduubtaan WhatsApp
Marka hore dheh taas WhatsApp waa barnaamij fariin deg deg ah oo ay leedahay Facebook. In kasta oo ay hirgeliyeen tallaabooyin taxane ah oo amni, ma ahan kii ugu horreeyay ama ugu xumaa ee ay qaadaan, sidoo kale Albert Rivera ma aha siyaasiga kaliya ee ay dhibaatadu soo gaadhay. Mar aan sii fogeyn, koox ka socota Israa'iil ayaa ku lug lahayd weerar kale oo baaxad leh barnaamijkan.
Sidaad ogtahay, WhatsApp waxaa loogu talagalay inay ku shaqeyso kaliya qalabka taleefannada gacanta ee la xiriira kaarka SIM-ka iyo lambar taleefan oo lagama maarmaan ah. Tani waxay kaga duwan tahay barnaamijyada kale ee aan u baahnayn lambar taleefan oo ay ku shaqeeyaan. In kasta oo ay run tahay in WhatsApp ay leedahay macaamiil ay ku rakibaan aalado kale sida kombuyuutaro, isticmaalkooda shabakadda, iwm. (kombiyuutar kasta oo leh xiriir internet iyo biraawsar ku habboon ama macmiil). Laakiin waxaad had iyo jeer u baahan tahay mobiil si aad u hesho.
Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku rakibto WhatsApp barnaamijyada kale, laakiin marin u helka iyo joogteynta koontada, waxaad had iyo jeer u baahan tahay inaad gasho lambarka taleefanka ee loo diro farriimaha. xaqiijinta fariimaha SMS. Farriimahan qoraalka ahi waxay leeyihiin lambar nambar ah oo loo baahan yahay in lagu bilaabo kal-fadhiga WhatsApp dhammaan waxyaabaha ku jira xiriirada, sheekaysiga la duubay, sawirrada, iwm, oo lagu kaydiyay keydka.
Haddii qof isku dayo inuu ka helo WhatsApp-kaaga qalab kale, maxaa yeelay ogow taleefankaaga gacanta, waxa aad sameyn kartid waa rakibida barnaamijka ama ka isticmaal shabakadda, taleefankaaga dhig, laakiin ma heli karin. Maaddaama ay ka maqnaan lahayd lambarka xaqiijinta ee ay kuugu diraan mobiilkaaga. Tan waxaan uga jeedaa laba shay: dhinac, haddii aan helo lambarkaas, waxaan heli lahaa wax walba oo aan ku galo astaantaada; Iyo in haddii aad heshay noocyadan fariimaha ah inkasta oo aadan isku deyin inaad gasho koontadaada WhatsApp, waxay noqon kartaa in qof isku dayayo inuu galo koontadaada.
Qof damac xun leh, markay ogaadaan inuu taleefankaaga isticmaali karo dhaqanka phishing inaad isku daydo inaad hesho lambarkaas maqan. Waxa aan sameyn karay, si aan u siiyo tusaale fudud, waa inaan kuu soo diro fariin iyada oo loo marayo barnaamijka laftiisa oo leh koonto leh sawir muuqaal leh astaanta WhatsApp, iyo sidii ay xubin ka tahay kooxda farsamada shirkadda inay ku weydiiso inaad u sheegto isaga lambarka ku soo gaadhay SMS. Hadaad qaniinto, waxaad siisay fursad ...
Waxay sidoo kale kuu soo diri karaan SMS ka dib SMS-ka oo wata lambarka, iyagoo kaa codsanaya inaad geliso lambarka kuu yimid oo aad ugu dirto isla lambarkii uu SMS labaad kuu soo diray. Xaaladdan oo kale, waxay mar kale lahaan lahaayeen waxay u baahan yihiin inay ku afduubtaan koontadaada. Sidaa darteed, waxa muhiimka ah ee looga hortagi karo shilka noocan ah waa inaad taas ogtahay marwalba waa inaad xafidaa furaha. Ma jiro qof loo maleynayo inuu ka socdo WhatsApp oo ku weydiin doona waqti kasta, mana aha inaad u dirto meel kasta. KALIYA KUGU GAL APP ISKA HADII AAD GALAY!
Markaan fahano sidee u shaqeeyaa nidaamka gelitaanka WhatsApp, waxaad awoodi doontaa inaad si fiican u fahamto wixii ku dhacay kiiska Albert Rivera. Wixii ay ku sameeyeen, iyo waxa ay Cs qaniintay ayaa ah inay ka faa'iideystaan ​​farsamo kale oo ka duwan tan aan kor ku soo sheegay, laakiin la mid ah xagga habka loo wajahayo:
Qof xun ama koox dad ah waxay WhatsApp ugu warbixiyeen nambarka mobaylka Albert Rivera's waa la la wareegay, taasi waa, sidii in taleefanka gacanta ee Cs la xaday.
WhatsApp wuxuu diray Albert Rivera a SMS leh lambarka xaqiijinta si loo xaqiijiyo lahaanshihiisa.
Dadkan oo aan la garanayn ayaa iska dhigay shaqaale WhatsApp waxayna ka codsadeen inay u soo diraan lambarka xaqiijinta SMS. Waana qaladkii Rivera uu ...
Hadda, mar haddii ay haystaan ​​lambarka taleefankaaga iyo lambarkaaga, way awoodaan gasho oo iska dhig Albert Rivera.
Muxuu kaga duwan yahay waxa kor lagu sharaxay? Waa hagaag dhaqaaqii taatikada in la iska dhigo qofka iska dhigaya WhatsApp. Sababta Mid aad u fudud, adeeggu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad barnaamijka uga adeegsato aalado kala duwan isla waqtigaas. Haddii aad isticmaaleyso dhowr macmiil isla waqtigaas wax dhibaato ah ma jiri doonto, runtiina kuwa badan ayaa sidaa u sameeya si ay si raaxo leh uga soo qoraan kombuyuutarkooda halkii ay moobilka kaga soo qorayaan. Laakiin xaaladdan, wax kasta oo laga sameeyo kal-fadhiga macmiilka PC-ga waxaa laga arki karaa moobaylka. Xaaladda noocaas ah, Albert wuxuu ogaan karaa dhaqdhaqaaq laga shakiyo oo uu tallaabo qaado. Dhinaca kale, haddii ay ka qaadaan marinkiisa oo ay siiyaan oo keliya macmiilka kale, way u roon tahay dambiilayaasha internetka ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Tani waa sida ay isugu dayeen inay afduubtaan koontada WhatsApp ee Albert Rivera
Systemd-homed qayb cusub oo loogu talagalay maaraynta tusaha guryaha